Nhau - Nezve Chipikiri UV gel Chipolish, ichive chakajeka muhupenyu hwako
Chipikiri UV gel polish
Ruvara gel kupolish ikozvino inogona kutaridzwa seyakajairika mashandiro mune zvipikiri salons. Pakutanga, zvipikiri zvainyanya kupatsanurwa kuita zvipikiri zvekristall uye zvipikiri zvephototherapy, asi izvozvi nzara dzekristaro hadziwanzoonekwa. Phototherapy zvipikiri zvinoda kuvezwa nemwenje yeultraviolet mushure mekushandisa phototherapy gel. Gare gare, kuitira kufambisa mashandiro acho, iyo girafu rekurapa rakagadzirwa kuti rive nyore kushandisa sekupenda kwembambo. Muchidimbu, musiyano uripo pakati pekupenda nzara nechairi ndechekuti mushure mekuiswa kwembambo, mwenje unodiwa.
Paunenge uchigadzira chipikiri chechipikiri, iwe unodawo kuisa rimwe rinokosha gel, senge bhalansi fluid, inoshanda glue, primer, sealant, nezvimwe.
Iyo primer ndiyo chete chipikiri mune aya magells ayo anozosangana nekusangana nezvipikiri zvako. Iyo inowanzovimba neasina simba acidity kunamatira inotevera yevara yeglue kune zvipikiri zvako. Vazhinji vavo vane zvishoma acidic kuravira. Kuti ugovasunga, unofanirwa kubvisa mvura yakawandisa uye girizi kubva muzvipikiri zvako pakutanga. Ichi ndicho chikonzero mashopu mazhinji ezvipikiri anozora nzara dzako nezvipikiri pamberi pemanicure, kwete chete kubvisa mvura nemafuta, asiwo kupora nzara dzako. Concave uye convex pamusoro, saka unogona kuvimba nekuwedzera kukakavara kune zvirinani chisungo.
Vamwe vagadziri vanozodaidza chipikiri kumeso kunatsa mvura, kuomesa mvura. Ini ndambotaura kare kuti mumazuva ekutanga eumhizha, nzara yepamusoro yaiwanzo kukwizwa. Iwe unogona kufunga nezvazvo sekuvimba nenzira dzepanyama kuve nechokwadi chekunamatira, ipapo nzira dzemakemikari dziri kuenzanisa mvura. Vagadziri vazhinji ikozvino vanoti pasina kukwenenzverisa zvakanyanya, vanogona kuisa chiyero mvura pachipikiri, uye voshandisa nzira yake yekukukurwa kwemakemikari kubvisa mvura nemafuta kuona kunamatidzwa. Kana iwe uri ma novice kana avo vasingade kupurinda zvipikiri zvakanyanya, unogona kushandisa chiyero mvura pane. Ehe, iwe haufanire kunetseka zvakanyanya nezvekukuvadza nzara dzako zvakanyanya. Mushure mezvose, kumeso kwako kunogona kuve acidified ne salicylic acid.
Ruvara rweUv gel polish
Ruvara gel kupolisha ndiyo protagonist muiyo gel, uye ruvara rwako uye chimiro zvinoenderana nazvo. Mazuva ano, kuwedzera kune akajairika mavara, kune akasiyana masitayera ane kupenya, ziso rekati, rine nyeredzi denga, kunyange jelly guruu, yakasviba glue, nezvimwe. Chaizvoizvo chete iwe haugone kufunga nezvazvo, hapana chausingakwanise kutenga .
Inoshanda gel polish
Zvinoenderana nebasa raunoda, izvi zvinogona kukamurwa kuve yakamisikidzwa nzara gel polish, yekuwedzera gel polish, nezvimwe. Kazhinji kutaura, kuitira kuti isakanganisa chimiro uye neruvara, glue inoonekera inoshandiswa. Kana iwe uchida kuita kumera, iwe ungangoda yakajeka girazi ine yakanaka ductility. Kana iwe uchida kugadzira chitaera kana kusimbisa zvishongo, saka unoda mbichana mbichana. Muchokwadi, chinhu chakakosha ndechekuona kana izvi zvinonamira zvingakubatsira iwe kuita zvaunoda. Chinangwa chakakwaniswa.
Kutora gel polish
Vamwe vanhu vanozvitiwo silk gel polish, dandemutande uv gel polish (manzwi asinganzwisisike), nezvimwewo irworudzi rudzi rwembambo yezvipikiri, asi ine ductility yakanaka kwazvo uye inogona kudhirowa mitsara yakatetepa uye isina kutyorwa. Iyo inokodzera kudhirowa mutsara, kazhinji ine peni yekudhirowa. Pakutanga, paive nevhidhiyo paWeibo iyo yakadhonzerwa nemukadzi wechiRussia manicure, iyo yakanga isina kunaka.
Wepamusoro jasi chipikiri gel polish:
Seizvo zita rinoratidzira, yekupedzisira UV gel yakashandiswa pane zvipikiri art. Zvakajairwa zvekusimbisa materu, akasimba ekuisa chisimbiso, uye echando chisimbiso matanda izvozvi zvajairika. Yakajairwa yekuisa mucherechedzo ndeye kungojekesa uye kuchengetedza nzara pamusoro. Iwe unogona kufunga nezve yakadzikama yekuisa mucherechedzo sefirimu yakapfava yefoni, asi ichave yakasimba. Pamusoro peizvo zvataurwa pamusoro, chisviniro chakasungirirwa chando chichaita yako UV UV gel kupedzisira yaburitsa chando, icho chakanakira mamwe masitayera akadzika-kiyi.